WESTERN UNION နဲ့ငွေလွှဲကြမယ်... ~ MSU Portal
3/26/2013 09:09:00 PM Navi Kyaw No comments
အတွေ့ အကြုံ ရှိပြီးသင်္ဘော သား တွေ ကတော့ သိပြီးဖြစ်ပါမည်။
ကမ္ဘာ အနှံ အပြား နိုင်ငံ ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်တွင် အေး ဂျင့် ပေါင်း ၄၈၆၀၀၀ ကျော်ဖြင့် ငွေလွှဲ လုပ်ငန်း ပြု လုပ်နေသော company ဖြစ်သည်။
ငွေ လွှဲသူ (နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့) နှင့်
ငွေလက်ခံ (မြန်မာ နိုင်ငံမှ Western union နှင့် ချိတ်ဆက် ထားသော ဘဏ်တွင် ထုတ်ယူမည့်သူ) နှစ် ဦးစလုံး
မည်သည့် ဘဏ် အကောင့် (bank account) ငွေလွှဲသူ ရော လက်ခံမည် သူပါ ရှိရန်မလို။
ငွေလွှဲ ပို့ မည်သူ (နိုင်ငံခြားမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ) လုပ်ဆောင်ရန်
မိမိရောက်နေတဲ့ နိုင်ငံ မှာ ရှိတဲ့western union အေ့ဂျင့် သို့ ဘဏ် ခွဲ များသို့ သွားပြီး ငွေ ပေးပို့ ဖောင် တွင်ြဖ ည့်ပါ။
Go to the nearest Western Union Agent location and fill out the ``SEND MONEY´´ form.
ငွေ ပေးပို့ ဖောင်ဖြည့်ပြီး လျှင် ပေးပို့ ငွေ။လွှဲ ခ။ သက်သေခံကတ်ပြားနှင့် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်း များ ကို တင်ပြပါ။
Present the completed form along with the money you wish to send,the transfer fee and your identification document as required.
ငွေလွှဲ ထိန်းချုပ် နံ ပါတ် ဂဏန်း ၁၀လုံး ``MTCN´´ ပါဝင် သော ငွေ လက်ခံ ပြေစာ ကိုရယူပါ။
Receiveareceipt together with Money Transfer Control Number (MTCN)
ငွေလက်ခံမည့် (မြန်မာ နိုင်ငံ ) သူ သို့ ပေးပို့ သူ နာမည်။ပေးပို့ ငွေ ပမာဏ။ MTCN ဂဏန်း ၁၀လုံး နှင့် သင်ငွေလွှဲလိုက်သော လက်ရှိ ရောက်နေသော နိုင်ငံအမည် ကို အကြောင်းကြား ပါ။
Inform the receiver of the sender's name,amount sent,MTCN 10digits, and country where the money was sent from.
လက်ခံမည်လူ နှင့် အနီးဆုံး Western union ချိတ်ဆက် BANK နှင့် အေ့ဂျင့် (WESTERN UNION ဆိုင်းဘုတ်ရှိသည့် နေရာ)ထံ သို သွားပါ။
Go to nearest Western union agent location,fill out the ``RECEIVE MONEY FORM ´´ with full details of sender name,amount expcted,sending country,10 digits MTCN.
ငွေလက်ခံဖောင်ဖြည့် ပြီးသက်သေခံ ကတ်ပြားလို အပ်သောစာရွက် စာတမ်း များ နှင့်အတူ တင်ပြပါ။
Present the completed form along with your identification document as required.
ငွေသားလက်ခံပြီး ငွေလက်ခံ ပြေစာ ရယူပါ။
Collect your money and receipt
မိနစ်ပိုင်း အတွင်း သင်လွှဲလိုက်သော နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ မည်သည့် Western union ရဲ့ ဘဏ်ခွဲ တိုင်းမှာ ငွေသား ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
ငွေ ပေး ပို့သူ မှသာ အကျိုး ဆောင်ခ ပေး ရပြီး လက်ခံသူ မှာ ကျသင့်ငွေ တစ်စုံ တစ်ရာ မပေး ရပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ကျပ်ငွေ ဖြင့် ထုတ်ယူ ရမည်။
ငွေ လွှဲခ နှင့် လဲလှယ်နှုန်း ကို မိမိ ရောက်ရှိ နေသော နိုင်ငံ ရဲ့ western union ကောင်တာ တွင်ငွေ မလွှဲ ခင် မြန်မာနိုင်ငံမှ လက်ခံ ရရှိမည့် ငွေပမာ ဏ ကို သိရှိရသည့် အတွက် မိမိ ကိုယ်ပိုင် ဆန္ဒ ဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင် ပါသည်။
မိမိ ချွေးနည်းစာ ကို မိမိ ရဲ့ မိသားစု အတွက် အပြည့်အဝ အသုံးပြု နိုင်အောင် ရည်ရွယ်သည်။
သင်္ဘောသား ကောင်းကျိုး လိုလား သော
Myanmar Seamen Union.
Shared by - XD @ MSU.